🥇 ▷ Mustaqbalka sawir qaadista waxaa iska leh kuwa casriga ah: Samsung iyo Xiaomi waxay lahaan doonaan 108 megapixels ✅
Mustaqbalka sawir qaadista waxaa iska leh kuwa casriga ah: Samsung iyo Xiaomi waxay lahaan doonaan 108 megapixels
Juunyo sedex sawir qaade National Joographic ay beddeleen kaameeraha caadiga ah ee mobilada. Waxay ku sameeyeen isaga Calankii ugu dambeeyay ee One Plus si ay u qabsadaan dhowr gees oo Waqooyiga Ameerika ah oo dheeri ah. Andy Barton, Carlton Ward Jr. iyo Krystle Wright ayaa mas’uul ka ahaa qabashada soo jiidashada Waqooyiga Ameerika iyada oo loo marayo kamarad saddex-geesood ah (48 MP + 16 MP + 8 MP) ee garoonka. Natiijadiisa shaqadiisa waa warbixin cajiib ah oo muujineysa quruxda Cawska Florida, xeryaha Utah iyo xeebta cagaaran ee California.
Moobaylka ayaa ka dhaafay kamaraddii caadiga ahayd? Soosaarayaashu waxay sii kordhinayaan xooga saaraan bixinta telefoonada kaameeradda casriga badan, qaar ka mid ah garsoorayaasha suuqa ayaa uga mahadcelinaya sirdoonka macmal, pixels, dareemayaasha iyo hagaajinta software. Teknolojiyaddan kaliya looma adeegsan sawir qaadayaasha hiwaayadda u hanqal taagaya inay sawiradooda ku faafiyaan shabakadaha bulshada, laakiin sidoo kale waxay u adeegsadaan xirfadlayaal shaqadooda maalinlaha ah. Jiilka cusub ee taleefanada ayaa soo bandhigi doona sawirro 108 megapixels ee qaraarka sida Samsung iyo Xiaomi ay dhawr maalmood ka hor ku dhawaaqeen. Kuuriyada Koofurta ayaa iyadu soo bandhigtay cusub ISOCELL Bright HMX sawir qaade loogu talagalay taleefannada gacanta casriga ah, kaasoo horumarsan iyada oo lala kaashanayo shirkadda Shiinaha.
Samsung iyo Xiaomi waxay iska kaashadeen oo ay abuureen 108-megapixel camera ee adduunka ugu horreeyay. Farsamada yaabka leh waxaa lagu magacaabaa Isocell Bright HMX.
Ilaa hadda ma cadda nooca magacyada casriga ah ee ay kula shaqeyn doonaan dareemayaashan laakiin waa maalin ku habboon teknoolojiyadda wareega! pic.twitter.com/vr4MCESbcn
???????????? ????????????????????????????! (@PeterJev) Ogast 13, 2019
Sida lagu sharaxay qoraal, waa qalabka koowaad ee sawirka mobilada ee warshadaha in kabadan 100 milyan oo pixels. Gaar ahaan, dareemahu wuxuu kordhinayaa xalka ugu badan ee shey-aragtida muuqaalka casriga ah illaa iyo hadda, oo ka socda 64 illaa 108 MP, kaas oo u oggolaanaya inuu bixiyo a qaraarka u dhigma kan kaamirada SLR ee dhijitaalka ah Dhamaad sarre
Hagaajinta sidoo kale fiidiyowga. Dareenka cusub ee Samsung ayaa oggol waxaad qaadataa ilaa 6K (6,016 x 3,384 pixels) iyo 30 xabbadood halkii ilbidhiqsi (fps) adigoon la kulmin luminta aragtida xagal, adigoo raadinaya inay ka badato inta ugu badan 4K ee kamaradaha hadda jira.
In kasta oo megapixels aysan ahayn wax walba. Google tusaale ahaan isagu taas ayuu ku gaadhay kaamirooyinka Pixel-kaaga waa astaamaha suuqyada mahadnaqa ay u qabaan maamulka barnaamijyada, iyada oo loo sii marayo AI iyo oo leh hal dareemaal (ee megapixels ee 12.2 iyo f / 18 ee kamaradda dambe), oo awood u leh in lagu gaaro natiijooyin cajiib ah.
Sida laga soo xigtay el wax ka barta ‘Safarka iyo Sawirka Sawirka’, waxaa diyaariyey shirkada safarka ee lama filaanka ah ee Isbaanishka ee Waynabox, the telefoonada casriga ah Waxaa laga door bidaa inay qabtaan sawirada safarka, in kasta oo 36% ay yiraahdaan waxay kaamaradu u isticmaalaan meelaha ay ku socdaan. Fududaynta wadaagga shabakadaha bulshada – gaar ahaan barta Instagram-ka iyo taabasho codsiyada Iyaga oo leh kalasoocyo kala duwan ayay gacan ka geysteen abuurista kaamirooyinka caadiga ah ee qaybta sawirka. Kaamirooyinka taleefanka miyaa ugu dambeyntii naga hilmaami kara SLR? Tartanku wuxuu ku xirnaan doonaa heerka xirfadeed ee adeegsadaha iyo sidoo kale baahiyihiisa markii ay qaadanayaan sawir ama mid kale, in kastoo runtu ay tahay taasi inta badan dadku waxay adeegsadaan mobilada Sida kamaraddaada ugu weyn.
Kuwa waaweyni sidoo kale waxay gartaan khasaaraha. Canon mar dambe ma iibiso sidii hore oo waxaa ka lumay 10.9% sanadkii la soo dhaafay. Qiimaha marka laga hadlayo taleefannada waa qodob muhiim ah oo tixgelin la siinayo, in kasta oo kuwa dambe ay u dhaqaaqayeen in ka badan 1,000 yuuro qaybta ugu sarreysa. Munaasabadda Maalinta Sawirada Adduunka, Suuqa iibka iyo iibinta ee Milanuncios ayaa sii daayay xogta suuqa gacan labaad ee maqaallada sawir qaadista ah ee dalka Spain sanadkii la soo dhaafay, kaasoo dhaqaaqay in ka badan 20 milyan oo yuuro laga soo bilaabo Ogosto 2018 ilaa Luulyo 2019.
Marka loo eego qaybaha ugu caansan, marka hore dhammaan DSLRs (oo leh qiime ka badan 9 milyan oo yuuro, 45.66% wadarta guud ee suuqa), oo ay ku xigto muraayadaha indhaha iyo muraayadaha indhaha (in kabadan 4.5 milyan oo yuuro, 22.76%) iyo aalado kale (in kabadan 2.8 milyan euro, 14.23%). Waxyaabaha kale ee lagu xayeysiinayo madasha ayaa ah kamaradaha kombuyuutareedka dijitaalka ah (oo leh qiimo ka badan 1.6 milyan yuro, 8.20%), analog SLRs iyo compact (in kabadan 1.1 milyan oo yuuro, a 5, 86%), toosh (391 kun oo yuuro) , 1.95%) ama bacaha iyo boorsooyinka (69 kun euro, 0.35%).
“Sanadihii ugu dambeeyay, horumarka tikniyoolajiyaddu waxay si weyn u siisay adduunka sawir-qaadista, maadaama oo kaliya kamaraduhu hore ugasoo marin xagga awoodda iyo tayada muuqaalka, laakiin aaladaha kale sida casriga, kamaradda ficil ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, oo u oggolaanaya annaga waxaan qaadaneynaa dabinka mar walba, meel walba, ”ayuu yiri Pedro González, oo ah ganacsade ku ganacsada Kingston Spain. “In kasta oo aaladdaas oo dhami ay noo oggolaaneyso inaan sawirro qaadno, dhammaantood ma ahan inay leeyihiin astaamo isku mid ah, sidaa darteed, waxay u baahan yihiin dhameystir ku habboon faahfaahintooda farsamo si ay uga faa’iideystaan,” González wuxuu raaciyay.
Xogta ayaa muujineysa taas sawiro ayaa la qaaday sanadihii la soo dhaafay iyadoo ay soo socdaan teknoolojiyad cusub iyo adeegsiga shabakadaha bulshada. The caadooyinku way isbedeleen, tirada iyo nooca sawirrada la qaaday markii safarka iyo Qaabka loo wadaago asxaabta iyo qoyska.
The Shabakada bulshada ee la doorbidayo si ay u soo geliso sawirrada safarka waa 7 ka mid ah 10ka isticmaale ee Instagram Xaruunta ‘postureo’ oo inta badan waqtiga nasashada lagu jiro. Waa masraxa ugu dhakhsaha badan ee ku koraya Spain waxaana warbixin ay soo saartay Ururka Caafimaadka Bulshada ee Caafimaadka Bulshada iyo Dhaqdhaqaaqa Caafimaadka Da ‘yarta ku tilmaamay mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee ugu xun caafimaadka maskaxda ee dhalinyarada “sababa dareenka walaaca.” In kasta oo ay tani tan beddeli karto ilaa Shirkadda ‘Instagram’ waxay bilawday inay qariso waxyaabaha ay jecel yahiin aaladaha ay kuleeyihiin waddamada qaarkood, oo ay Spain kamid tahay MAYA (Australia, Brazil, Canada, Italy, Ireland, Japan iyo New Zealand) oo leh ujeedadoodu tahay in la yareeyo cadaadiska isticmaalayaasha sidoo kale beddelo Qaabka ganacsiga ee uu dhisay ‘influencer’. Laga yaabee tani waxay sidoo kale yareyn doontaa khataraha helitaanka sawirka saxda ah. Sababtoo ah sida Einstein yiri, “laba shay waa kuwo aan dhamaaneynin: doqonnimada bini’aadamka iyo caalamka.” Ta labaad ma hubin jir-yaqaanka caanka ah ee reer Jarmal, kaas oo timaha u jiidi doona da’dan ‘selfies’ iyo ‘qaab-dhismeedka’ taasoo dareenka wanaagsan uu yar yahay. Sababtoo ah qaar baa waligood fahmi doonin meeqa nolosha ayaa mudan oo sii wad naftiisa khatar gelinaya ee sacab muggeed oo jecel. Intii u dhaxaysey 2011 iyo 2017 ugu yaraan 259 qof ayaa ku dhintey meelo kala duwan oo adduunka ah iyagoo isku dayaya inay is-bartaan